घा’इ८ते कमला लाई बस ब्याक गारेर मा८र्यो पापी ड्राइभर ले ! – Khabar Patrika Np
घा’इ८ते कमला लाई बस ब्याक गारेर मा८र्यो पापी ड्राइभर ले !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: ०:३९:४६
कहिलेकाँही मात्र होटेल जाने गरेकी कमलाको दिन आज अन्तिम होला भन्ने कसले सोचेको थियो र उनका स–साना बच्चाको अवस्था अब के हुन्छ ?” उनले भावुक हुँदै भनिन्।
घट८नाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले भने कमलाको मृ८त्यु ठ्या८क्कै कसरी हुन गयो भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। बस ब्याक गरेर कमलालाई फेरि किचेको भन्ने आ८रो’प प्रहरीबाट पुष्टि हुन बाँकी नै छ। प्रत्यक्षदर्शी एक महिला भन्छिन् –“आज उनी डेढ वर्षीय छोरालाई लिएर होटेल गइरहेकी थिइन् । रोड क्र८स गरिरहेकी उनलाई गाडीले ठक्कर दियो। उनी ल८डि’न्।